Olee Otú Ekwensu Si Malite Ịdị? | Ajụjụ Baịbụl
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Lingala Lithuanian Malagasy Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
Olee otú Ekwensu si malite ịdị?
Ọ bụghị Chineke kere Ekwensu ka ọ bụrụ Ekwensu. Mgbe Chineke kere ya, ọ bụ mmụọ ozi. Ọ bụ ya mechaziri jiri aka ya ghọọ Ekwensu ma ọ bụkwanụ Setan. Ihe Baịbụl kwuru gosiri na o nwere mgbe Ekwensu na-efe Chineke ma na-akwụwa aka ya ọtọ. Nke a na-egosi na Ekwensu bụbu otu n’ime ndị mmụọ ozi Chineke kere nke na-erubere Chineke isi.—Gụọ Ezikiel 28:15.
Oleekwanụ otú mmụọ ozi ga-esi aghọ Ekwensu?
Mmụọ ozi ahụ ghọrọ Ekwensu gbara Chineke mgba okpuru ma mee ka Adam na Iv soro ya nupụrụ Chineke isi. O si otú ahụ mee onwe ya Setan, nke pụtara “Onye na-eguzogide” Chineke.—Gụọ Jenesis 3:1-5; Mkpughe 12:9.
Mmụọ ozi ahụ nke ghọrọ Ekwensu nweere onwe ya ikpebi ma ọ̀ ga-erubere Chineke isi ma ọ̀ ga-enupụrụ ya isi. Otú ahụ ka ọ dịkwa ma ndị mmụọ ozi ndị ọzọ Chineke kere ma ụmụ mmadụ. Ma, ọ bịaziri gụwa Setan agụụ ka e fewe ya ofufe. Kama ime ihe dị Chineke mma, ihe ka Setan mkpa bụ ka a na-asọpụrụ ya.—Gụọ Matiu 4:8, 9; Jems 1:13, 14.
Olee otú Ekwensu si na-eduhie ndị mmadụ kemgbe ahụ? Ànyị kwesịrị ịtụ ya ụjọ? I nwere ike isi na Baịbụl mata azịza nke ajụjụ ndị a.